isivumelwano: bamba le qi-samsung ekhawulezayo yokutshaja ngaphandle kwamacingo okuma ngaphandle kwe- $ 27.99 (31% icinyiwe)!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Yibambe le Qi-enikwe amandla e-Samsung ekhawulezileyo yokutshaja ngaphandle kwe-wireless nge $ 27.99 (31% icinyiwe)!
Idili: Yibambe le Qi-enikwe amandla e-Samsung ekhawulezileyo yokutshaja ngaphandle kwe-wireless nge $ 27.99 (31% icinyiwe)!
I-Samsung ekhawulezileyo yokutshaja Qi-inika amandla ukutshaja ngaphandle kwamacingo Ubusela bemihla ngemihla Entsha $ 27.99 ($ ​​40.95)
31% isaphulelo N / A
Masijongane nayo, bantu, ukutshaja ifowuni yakho ngentambo kuya kusiba krwada. Okwangoku kukho imithwalo yezixhobo zokutshaja ngaphandle kwamacingo ezisusa ubunzima beentambo kunye namazibuko, kwaye ngethamsanqa, esinye sezixhobo ngoku sinandipha isaphulelo esikhulu.
Indawo yokutshaja ngaphandle kwamacingo e-Qi enikwe amandla e-Qi okwangoku isaphulelo se- $ 40.95 kwi-e-Ivenkile yakwa-Samsung kunye neapos; kodwa ukubiwa kwemihla ngemihla kuyayibonelela ngexabiso eliphantsi!
Le yimveliso yakwaSamsung, kwaye itekhnoloji yokuTyala ngokukhawuleza (ihlawulisa amaxesha angama-1.4x ngokukhawuleza kunesiqhelo) iyahambelana kuphela nesiphatho esiphathwayo eziphathwayo ezifana ne-Galaxy Note 5, i-Galaxy S6 edge +, i-Galaxy S7 / S7 Edge, kunye ne-Galaxy S8 / S8 +, njalo njalo. Nangona kunjalo, nayiphi na i-smartphone ehambelana neQi (i-iPhone 8 entsha, i-8 kunye ne-X ifakiwe) inokuhlawuliswa ngesantya esiqhelekileyo.
Konke okufuneka ukwenze ukuze usebenzise istendi kukuyiqhagamshela kwintambo yokutshaja kwaye ubeke ifowuni yakho esitendini. Isamsung yongeze itshaja yeWall Charge ngokukhawuleza, kwaye awuzukusebenzisa eyakho ukunika amandla isixhobo. Isalathiso se-LED esakhelweyo siya kukwazisa ukuba i-handset yakho ayihambelani kakuhle kwaye xa ulungelelwaniso lwentlawulo elungileyo lufunyenwe.
Ukuba le ntsebenzo iyavusa umdla wakho, ikhonkco kwiiNdawo zokuThabatha kweMihla ngemihla zingafunyanwa apha ngasentla. Tyelela eli khonkco ukuze ubone ukuba ifowuni iyahambelana neQi. Gcina ukhumbula ukuba xa ubona into efana ne 'IQi Mobile okanye i-UniQi efunekayo' ngezantsi kwegama lefowuni yakho, kuya kufuneka uthenge ukongezwa okwahlukileyo ukuze usebenze ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ngaba lg ifowuni elungileyo
I-Samsung Galaxy Tab A 10.1 kunye ne-S Pen iyeza kungekudala
Ukuhlaziya iT-Mobile Samsung Galaxy Qaphela 10 kunye neNqaku 10+ kwi-Android 11
I-Apple iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus ubomi bebhetri
I-T-Mobile kungekudala iza kufumana ukonyusa intengiso yonyawo kwiivenkile eziBalaseleyo zokuThenga nakwiWalmart